दलितका लागि असुरक्षित प्रदेश–२ : तीन वर्षमा ६२ को हत्या, १६८ महिला बलात्कृत Setokhari ::. News Portal
आईतबार, माघ ४, २०७७ ०८:४९:१९
दलितका लागि असुरक्षित प्रदेश–२ : तीन वर्षमा ६२ को हत्या, १६८ महिला बलात्कृत
३२ साउन २०७७ मा रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ बसबिट्टी जिंगडियाका २० वर्षीय निरंजन रामको हत्या गरियो । इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतोका अनुसार, शेख आजादले योजना बनाएर रामको हत्या गरेका हुन् । प्रहरी अनुसन्धानले रामको हत्यामा शेख आजादसहित अजयकुमार रंजन, विवेक राय यादव, अर्जुन राम, सिकन्दर पासवान र विजय महरा समेत संलग्न देखिएको थियो ।
सोनेलालले भने, “शुरूमा सच नर्सरीका सञ्चालकले नै निरंजनको हत्या गरेको डीएसपी ज्ञानकुमार महतोले हामीलाई भन्नुभएको हो, किटानी जाहेरी लिएर आउन भन्नुभएको थियो । तर, एक दिनपछि मृतकका बुवा नन्दलाल रामले सच नर्सरीका साहु राजाराम साह बनिया, लखन साह बनिया समेतलाई प्रतिवादी बनाएर किटानी जाहेरी दर्ता गराउन जाँदा जाहेरी दर्ता नै गर्न मान्नुभएन ।”
रौतहटको गरुडामा हत्या गरिएका राम सच नर्सरीमा मासिक रु.१५ हजार तलबमा दुई वर्षअघिदेखि काम गर्दै आएका थिए । तर, काम गरेको पैसा माग्दा साहु राजाराम साह बनियासँग विवाद भएपछि उनको हत्या भएको पीडित परिवारको दाबी छ । निरंजनका बुबा नन्दलाल भन्छन्, “काम गरेको पैसा नदिएपछि पटक पटक विवाद भएको थियो । त्यही बेला छोराको हत्या भयो ।”
रौतहट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सुशीलकुमार यादवका अनुसार निरंजन रामको हत्या अभियोगमा एक जना बालकसहित ८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तीमध्ये ३० भदौ २०७७ मा रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशमा शेख आजाद, अर्जुन राम, अजयकुमार रंजनलाई पुर्पक्षका लागि गौर कारागार पठाइएको छ ।
अर्का प्रतिवादी सिकन्दर पासवानको मानसिक स्थिति खराब भएका कारण प्रहरीको निगरानीमा काठमाडौंमा उपचार भइरहेकोले अदालतले बयान लिन नसकेको स्रेस्तेदार यादव बताउँछन् । उनका अनुसार थुनामा रहेका अर्जुन राम र अजय कुमार रंजनलाई चाहिं उच्च अदालत वीरगञ्जले १८ मंसीरमा जनही एक–एक लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा रिहा गरेको छ । विवेक रामको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
निरंजनको हत्यालगत्तै ३२ साउन २०७७ मा प्रहरीले प्रतिवादीसहित ११ जनालाई प्रक्राउ गरेको थियो तरपछि ३ भदौमा मनोज पासवान, चन्दन मल्लिक कायस्थ र प्रशान्त यादवलाई रिहा गरेको थियो । रिहा भएकाहरूमध्ये मनोज र चन्दनलाई भेटेका एड्भोकेसी फोरम प्रदेश–२ का संयोजक तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठका अनुसार उनीहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी विना गिरफ्तार गरेर हत्या कबुल गराउन कुटपिट गरेको थियो । पक्राउ परेका ११ मध्येका थिए दलित युवा विजय महरा । हिरासतमा प्रहरीले यातना दिएकोले उनको मृत्यु भएको पीडित परिवारको आरोप छ ।
हुन पनि निरंजन रामको हत्याको अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दै महरा प्रहरी नियन्त्रणमा मारिएपछि दलित समुदाय प्रहरीप्रति नै आक्रोशित बन्न पुग्यो । दलित संघर्ष समितिका संयोजक सोनेलाल राम थप्छन्, “प्रहरीले दलित हत्याको विश्वसनीय छानबिन गरी न्याय पाउने विश्वास दिनुको साटो दुई युवाको हत्या भएपछि हाम्रो प्रहरीप्रतिको भरोसा नै टुट्यो ।”
प्रहरी हिरासतमा सिकिस्त भएपछि विजयलाई शरूमा अनामिका अस्पताल गरुडामा लगिएको थियो । तर, त्यहाँ उपचार भएन । उनलाई ४ भदौमा नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा भर्ना गरियो । पक्राउअघि सामान्य रहेका विजयको वीरगञ्जमा उपचार गर्न लाग्दा दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडिसकेको थियो । प्रहरीको यातनाले उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको पीडित परिवारको आरोप छ ।
प्रदेश–२ प्रहरी नायव महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह भन्छन्, “प्रहरीले हिरासतमा लिएर चरम यातना दिएको कारण मृत्यु भएको सत्य होइन । उनलाई पक्राउ गर्न लाग्दा घरपरिवार तथा आफन्तहरूले अवरोध गरेर भगाउन खोजेपछि प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिंदा उनको शरीरमा चोटपटक लागेको हो ।” मृत्युअघि महराको दुई पटक मिर्गौलाको डायलासिस समेत गरिएको थियो ।
दलितहरूको दबाबका कारण गृह मन्त्रालयले ११ भदौमा गरुडा घटनाको छानबिन गर्न रौतहटकै इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका कार्यालय प्रमुख समेत रहेका उपसचिव डोरेन्द्र निरौलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानबिन नसक्दै इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह, प्रहरी हवलदार मुन्ना सिंह र फिरोज मियाँलाई १५ भदौमा ६ महीनाका लागि निलम्बन गरिएको छ ।
रौतहट गरुडाका निरंजन राम र विजय महरा मारिएको चार महीना पुगेको छ । तर, गरुडा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि त्यो प्रकरणमा शुरूदेखि मौन देखिए । रौतहटको गरुडा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रंगिलाकुमारी जैसवाल भन्छिन्, “दलित हत्या तथा बलात्कारको घटना बढेको छ, त्यस्ता घटनाका अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माग हो । तैपनि दलितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।”
जिप्रका धनुषाले जाहेरी लिन नमानेपछि १ असार २०७७ मा उनको जाहेरी पनि सरकारी वकील कार्यालय धनुषामा दर्ता गराइएको थियो । जाहेरी दर्ता भएकै दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषामा पठाइएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले जानकारी दिए । उक्त जाहेरीमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक बस्नेत बताउँछन् । किटानी जाहेरीका अभियुक्तमध्ये हालसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् ।
प्रदेश–२ को प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आँकडा अनुसार पछिल्लो ४० महीनामा यो प्रदेशका आठ जिल्लामा ६२ जना दलितको हत्या भएको छ भने १६८ जना दलित महिला बलात्कृत भएका छन् । (हे. तालिका)
प्रदेश–२ का आठ जिल्लामध्ये दलितका लागि सबैभन्दा असुरक्षित चाहिं प्रदेश राजधानी रहेको धनुषा नै देखिएको छ । धनुषामा गएको ४० महीनामा १६ दलित मारिएका छन् भने त्यसपछि सर्लाहीमा १२ दलित मारिएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ । प्रदेश–२ का ८ जिल्लामध्ये बलात्कार बढी हुने जिल्लामा पनि धनुषा नै परेको छ । त्यहाँ ४१ दलित महिला तथा बालिका बलात्कृत भएका छन् ।
बोदेबर्साइन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रन्जुकुमारी साह तेली आफ्नो पालिकामा दलित महिला तथा बालिका हिंसाको शिकार भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “दलितमाथिको हिंसा, छुवाछूत, भेदभावका उजुरी न्यायिक समितिमा आउँदैनन् त्यसैले हामीले केही गर्न सकिएको छैन । तर, दलितमाथिको हिंसा बढ्दो छ ।”
देशको कानूनले निषेध गरेको जातीय छुवाछूत २०७२ मा संविधान जारी भएपछि पनि मधेशमा कम भएको छैन । २०७४ को स्थानीय चुनावपछि पनि मधेशमा दलितमाथि हुने जातीय हिंसा चर्को छ । जातीय विभेदकै आडमा दलित माथि बलात्कार र हत्या हुने गरेको छ । छुवाछूतका उजुरीलाई प्रहरी र न्यायालयले समेत गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण दलितमाथि छुवाछूतको विभेद कम भएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगर भन्छन्, “छुवाछूत तथा भेदभावका कतिपय उजुरी प्रहरीले नै दर्ता नगर्ने गुनासो आउँदा हामीले हस्तक्षेप गरेपछि मात्र दर्ता भएका छन् ।”
प्रदेश–२ मा दलितमाथि हुने हिंसा चर्केको भए पनि हिंसा विरुद्धमा दलितको प्रहरी र न्यायालयसम्मको पहुँच भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेश–२ स्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईका अनुसार प्रदेश–२ मा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा जातीय छुवाछूत शीर्षकमा १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील इन्सेकका प्रदेश–२ संयोजक राजु पासवान जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटनाको स्वरूप परिवर्तन भएको बताउँछन् । “विगतमा देखिने गरी नै छुवाछूतको भेदभाव हुन्थ्यो भने अहिले घुमाउरो तरिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव हुन्छ । तर, न्यायमा दलित समुदायको पहुँच अझै छैन ।”
कतिसम्म भने कोभिड–१९ को संकटमा पनि दलितमाथिको ज्यादती कम भएन । अधिवक्ता राजकुमार महासेठ लकडाउनमा पनि दलित लक्षित हिंसाका घटना हुनु अत्यन्त दुखद तथा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहेको बताउँछन् । उनले भने, “दलितमाथिका हिंसाका घटनामा राज्यका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भए पनि कतिपय घटनामा प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पहुँचवालाले गाउँमा मिलापत्र गराउने, पंचायती बसेर सामान्य जरिवाना गरेर वा माफी माग्न लगाएर छाड्ने काम पनि भएको छ ।”
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालका अनुसार फौजदारी घटनामा समेत पंचायती गर्ने र मिलापत्र गराउने व्यक्तिहरूलाई समेत राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसो नगरिएकै कारण पनि दलित लक्षित हिंसाका घटनाहरू बढेको उनको कथन छ । “मौजूदा कानूनलाई राज्यले कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ” अर्यालले भने, “एउटा निकायमा पीडितको सुनुवाइ हुँदैन र दण्डहीनता बढिरहेको छ भने त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा पीडित पक्षले न्यायका लागि उजुरी दिने परिपाटी बढ्यो भने पनि हिंसाका घटनामा कमि आउन सक्छ ।”
पछिल्लो समय प्रदेश–२ मा दलित लक्षित हिंसाका घटनाहरू बढेको कुरा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव पनि स्वीकार्छन् । हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले रणनीतिक कार्ययोजना नै तयार गरेको तर त्यो लागू हुन नसक्दा दलितमाथि हिंसा अचाक्ली भएको उनी बताउँछन् । यादव थप्छन्, “प्रदेश प्रहरी अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन सकेको छैन, हामी अहिले पनि निर्देशन दिने अवस्थामा नभएर समन्वयात्मक भूमिकामा मात्र सीमित छौं । संघीय सरकारको निर्देशनमा चल्ने प्रहरीले झूटा मुद्दा लगाउने, अपराधीलाई उम्काउने जस्ता कामहरू गरेकोले दलितमाथिको हिंसा बढेको हो ।” (खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि अजय अनुरागीको रिपोर्ट)
बाँके प्रहरी प्रविनको हत्यारा पक्राउ गर्न सफल, आधा दर्जन संलग्न
नरैनापुरमा आईतबार सार्वजनिक विदा
सामुदायिक प्रहरीको नेतृत्वमा जोशी चयन
आयोजक जयकिसान स्पोर्ट्स ‘ए’ विजयी
काँग्रेस सत्तामा जान्छ तर, संविधान भत्काएर होइन : मिनेन्द्र रिजाल
काँग्रेस सत्तामा जान्छ तर, संविधान भत्काएर होइन : मिनेन्द्र रिजाल सेतोखरी